PS5 vs Xbox Series X - Iza amin'ireo Console Gaming no tsara indrindra? - Fitaovana
Xbox sy Playstation dia teo ambanin'ny ady tsy tapaka hanomezana traikefa farany lalao ho an'ireo mpilalao. Ny fivoaran'izy ireo tsy miova dia nanidy ny banga ka sarotra loatra ny mamaritra hoe iza no tsara kokoa. Izao indray, manana ny lalao goavambe roa mifaninana mifanohitra ianareo mba ho lasa tianao indrindra.
Ny konsolan'ny taranaka ho avy dia vonona ny hanome traikefa hilalaovana hi-fi miaraka amin'ny sary miavaka sy ny tahan'ny refin'ny revolisionera. Na izany aza, mety ho diso hevitra ianao toy ny gamer hafa. Raha tsy patron mahatoky ianao dia mety hampitahanao ny roa.
Amin'ity indray mitoraka ity, samy consoles dia samy mitantana ny hifanaraka. Manana lalao akaiky ianao. Andao hojerentsika hoe iza no mandresy!
PS5 VS Xbox Series X: Fakana fampifanarahana
Ny fanontaniana voalohany mety hipoitra ao an-tsainao dia hoe: ‘Mendrika hahazo PS5 na Xbox X ve ianao?’ Rehefa dinihina tokoa, maharitra fotoana iray vao ahafahan'ny console lalao dia ahazoana lalao mifanaraka aminy. Nahita izany tamin'ny konsolan'ny lalao teo aloha isika rehetra. Na izany aza, orinasan-tsarimihetsika maro no miandrandra ny console lalao vaovao sy manova ny lalao hataon'izy ireo hifanaraka amin'izany.
Ireo mifanentana roa ireo dia manana fifanarahana mihemotra. Ny fifanarahana mihemotra dia rehefa ny console dia manohana lohatenin'ny lalao avy amin'ny maodely teo aloha. Na izany aza, misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fahaiza-manao. Xbox Series X no manana ny tanana ambony miaraka amin'ny fanohanana mifanentana mandritry ny lalao Xbox 360. Mandritra izany fotoana izany, ny Playstation 5 dia manohana anaram-boninahitra PS4 amin'ny tsara indrindra.
Amin'ny taona ho avy, raha te hankafy ny fitehirizam-bokin'ny lalao Xbox ianao, dia afaka mandray soa bebe kokoa amin'ny Xbox Series X. Mandritra izany fotoana izany, ny Playstation 4 no tsara indrindra azonao amin'ny PS5.
Endri-javatra & famaritana
Raha ny fahombiazana dia samy afaka mifampitaha hatrany ny console roa tonta. Misy lafin-javatra sasany izay tsara kokoa ny PS5, raha Xbox Series X koa dia mitantana fitarihana azo itokisana. Ity misy fampitahana haingana eo amin'ny roa amin'ny lafiny famaritana:
AM-Ryzen 8 mpiorina namboarina namboarina manokana
Fanapahan-kevitra HD 8K
Memory Memory 825 GB
AMD Zen 2 8 Core namboarina manokana miaraka amin'ny herin'ny 2x
CPU 3,8 GHz
Playstation 5 dia mifantoka amin'ny traikefa afangaro
Ny fifantohana voalohany amin'ny Playstation 5 dia ny fanomezana traikefa amin'ny lalao immersive. Niasa iniana ny orinasa hanome sary, feo ary fanaraha-maso mahavariana.
Playstation 5 dia manolotra fitiliana taratra tsara kokoa ho an'ny sary milentika kokoa. Ny konsolan'ny lalao dia miasa ho console manokana miaraka amin'ny fiainana lalina kokoa. Raha mpankafy Spatial Audio sy Dolby Atmos ianao dia mety tianao ilay Tempest Engine vaovao ao amin'ny PS5 izay mandefa audio 3D.
DualSense Controller:Ity angamba ny ace ao anaty lavaka ho an'ny PS5. Ho an'ny traikefa lalina kokoa dia mitondra mpanara-maso anao izy ireo miaraka amin'ny tamberina haptic. Ankehitriny ianao dia afaka mahazo ny fahatsapana ny rotsakorana, ny fasika an-tongotra. Ny hetsiky ny lalao dia manomboka hevitra ihany koa, toy ny famerenana amin'ny basy, na ny fihenjanana amin'ny fisintomana kofehy na zavatra mitovy amin'izany.
Xbox Excels miaraka amin'ny fampifanarahana & fampisehoana
Raha tsy miraharaha firy ny traikefa ianao ary mankafy izay efa natolotr'i Xbox, dia manana ny faran'ny fampifanarahana ianao. Xbox Series X dia miasa miaraka amin'ireo mpanara-maso teo aloha niaraka tamin'ny iray vaovao. Ity dia dingana lehibe satria ny mifanentana amin'ny mpanara-maso PS5 dia voafetra ihany amin'ny maodely vaovao.
Ankoatr'izay, Xbox dia niasa mba hanafoanana ny fahamaimaizina amin'ny endriny rehetra. Noho izany, mitondra anao amin'ny fanodinana tsara kokoa sy amin'ny fahombiazan'ny lalao izany. Hanana lalao sy traikefa malefaka kokoa ianao.
Haverina haingana:Raha miresaka momba ny ace an'ny Xbox Series X ianao dia mety ho bokotra famerenana haingana haingana mety. Mamela anao hilalao lalao maro amin'ny fanidiana ny hafa. Tsy ilaina intsony ny hanavotanao ny lalao. Ny sisa ataonao dia ny manohy ny lalao nilalaovanao teo aloha ary tsindrio ny bokotra. Hitondra anao amin'ny toerana nijanonanao izy, azo antoka fa endri-javatra mety.
Raha tsy te-hamaky be loatra amin'ny antsipiriany ianao dia handresy amin'ity dingana ity i PS5. Ny Xbox Series X an'ny Microsoft dia manana endrika endrika boaty miaraka amina lohahevitra miloko mainty ho fanampiny voalohany. Mety ho somary mifintina sy malama izy io, saingy amin'ny ankapobeny, toa sekoly taloha izany. Manana famolavolana toa tilikambo ianao izay toa mitovy amin'ny ankamaroan'ny PC mifantoka amin'ny GPU ho an'ny lalao.
Noho izany, raha mpitia fanintona maoderina sy estetika mahafinaritra ianao, dia tsy hipetraka aminao tsara izany. Nanandrana zavatra minimalist sy mivantana i Microsoft. Na dia tian'ity tontolo ity aza ny fomba fanao faran'izay kely indrindra amin'ny zavatra maro, dia tsy anisan'ireny ny console gaming. Ny farany vita matte dia tsy manintona ihany koa.
Raha ampitahaina, i Sony dia manana modely marevaka sy mahafinaritra izay apetraka mitsivalana na mitsangana. Manana endrika mamirapiratra ianao miaraka amin'ny vatana fotsy sy curvature eo afovoany miaraka amin'ny lokon'ny sonia.
Raha ny momba ny mpanara-maso dia tsy misy fanovana na fanavaozana ao amin'ny Xbox Series X. Mandritra izany fotoana izany, PS5 dia manana endrika ergonomika tena miaraka amina firafitra izay toa tena mahafinaritra amin'ny endrika bokotra PS nentim-paharazana nampidirina.
Amin'ny ankapobeny eo amin'ny lafiny famolavolana, Playstation 5 dia mpandresy mazava ho an'ny konsolan'ny lalao manaraka satria Xbox Series X tsy mahavita manome izany fahatsapana vaovao sy manintona izany.
Toa tsy liana amin'ny fanomezana lohahevitra VR na safidy amin'ireo mpilalao i Microsoft. Mandritra izany fotoana izany, ny Playstation 5 dia manohana ny headset Playstation VR ho an'ny traikefa lalina. Izy io dia manamafy bebe kokoa ny teboka izay tadiavin'i Sony hanolotra traikefa filokana milentika tsy mbola nisy toy izany. Izany no fomba iray hijerena izay antenainao amin'ireo konsole lalao vaovao. Na izany aza, Xbox X Series dia tsy manan-javatra hatolotra ary mihemotra indray.
Ny lalao dia mijanona ho ahiahy tokoa satria ny lohateny manokana dia mbola eo am-panafahana fanjakana. Mandritra izany fotoana izany, raha mampitahanao lalao roa ianao, dia toa fanandramana sy fampisehoana mitovy amin'izany ny azy roa tonta.
Tsy misy isalasalana fa handray ny satro-boninahitra i Xbox raha tianao ny fahafinaretana amin'ny filalaovana ny lalao taloha rehetra hatramin'ny Xbox 360. Ny tena zava-dehibe, tsy mila manambola be amin'ny fitaovana vaovao ampiasaina ianao amin'ny Series X Xbox anao. Mandritra izany fotoana izany, Sony PlayStation 5 dia manana lohateny avy amin'ny PS4 ary mitondra anao fanandramana miavaka.
Miankina tanteraka amin'ny safidinao sy ny zavatra antenainao hahatongavan'ny 'ho avy' amin'ny filalaovana. Raha endrika maoderina kokoa izy io miaraka amin'ny traikefa manitrika an'ny mpanara-maso, dia mety ny PS5 no lalana. Na izany aza, raha mila traikefa tsy dia misy firy miaraka amin'ny fahaiza-manao fanodinana miavaka ianao dia mety ho tsara kokoa ny Xbox Series X.
5 Mpanara-maso finday COD tsara indrindra
Nickelodeon dia nanavao ny 'That Girl Lay Lay' nandritra ny vanim-potoana 2
Havoaka tsy ho ela ve ny Brightburn 2? Daty famoahana, mpilalao, vaovao ary fanamafisana!
aiza no ahazoana kaody psn maimaim-poana
roblox manaova ny lalaoo
ny fomba fanaovana akanjo tsara amin'ny roblox
rindrambaiko fanaovana beat tsara indrindra ho an'ny hip hop
boaty fahitalavitra tsara indrindra ho an'ny Netflix
mpilalao mozika maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny android